Madaxweyne Shariif oo Xarig jaray dib u howlgalida Suuqa Bakaaraha+Sawiro – SBC
Madaxweyne Shariif oo Xarig jaray dib u howlgalida Suuqa Bakaaraha+Sawiro
Posted by Webmaster on October 8, 2011 Comments
Madaxweynaha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowlada ayaa maanta booqday xarigana ka jaray Ganacsiga suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho .
Amaanka ayaa siweyn waxaa u adkeeyay ka hor booqashada madaxweynaha ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom iyagoona dhamaan xiray wadooyinka laga galo suuqa islamarkaana la arki karay ciidamo lagu daadiyay deegaanada hoostaga.
Madaxweynaha ayaa booqashadiisa waxay ku aadaneyd sidii uu si xor ah suuqu uga bilaaban lahaa qeybihii ganacsi ee kala duwanaa kaas oo intii mudo aheyba u xirnaa dagaalo halkaasi ku dhexmarayay xarakada mujaahidiinta Alshabaab iyo DKMG ah.
Madaxweynaha ayaa xariga ka jaray gaanacsiga suuqa isagoona hadal uu halkaasi ka jeediyay ku sheegay in dib loogu soo laabto suuqa islamarkaana ay muhiimadu tahay in bulshaweyntu ka shaqeeyaan amaanka .
Waxa uu kula dar daarmay dadka in ay soo gudbiyaan cid alaali cidii ka shaqeyneysa waxyaabaha amaanka wax u dhimaya ayna wax ka qaban doonaan ciidamada Amaanka DKMG ah ee Soomaaliya.
Waa markii ugu horeysay oo uu madaxweynaha dowlada KMG ah ee Soomaaliya booqasho ku tago suuqa bakaaraya islamarkaana uu xarig jaro dib u soo laabashada habsami u socodka ganacsi ee uuqa ugu weyn soomaaliya.
Sawirada By Radio Muqdisho